Imibhede Yesibhedlela Iyathengiswa, Amanani Imibhede Yesibhedlela Sikagesi - i-Annecy
Isinki yokukhuhla insimbi engagqwali
ISIGULI SOKUDLULISELA ISIGULI
Imishini yakwa-Annecy yaqala ngo-2012, kusukela ekukhiqizeni imibhede yasesibhedlela, bese ikhulisa wonke umugqa wezinto zesibhedlela. Manje sesiyimboni kanye nokuhweba inkampani edidiyelwe yokuhlinzeka amaklayenti ngokuyeka ukuthenga. Imikhawulo yethu yemikhiqizo ifaka phakathi: impahla yasesibhedlela, imishini yokuhlinza nemikhiqizo yezimo eziphuthumayo njll.
Ngemuva kokuthuthuka okungaphezu kweminyaka engu-8, u-Annecy ubenabasebenzi abangaphezu kwe-100, lapho, abasebenzi abanobuchwepheshe nobuchwepheshe abangaphezu kwabantu abayi-10, Izimpahla ezizungeze ku-1, 000,000USD indawo yokwakha ingamamitha ayi-2000square.
1. Lapho kudingeka umsebenzi wokudlulisa ongakwesokunxele nangakwesokudla, indawo yombhede kufanele ibe sesimweni esivundlile. Ngokufanayo, lapho umbhede ongemuva uphakanyisiwe futhi wehliswa, indawo yombhede eseceleni kufanele yehliselwe endaweni evundlile. 2. Ungashayeli emigwaqweni engalingani, futhi wenze ...
1. Ngaphambi kokusebenzisa umbhede wezokwelapha kagesi osebenza ngemisebenzi eminingi, qala uhlole ukuthi intambo kagesi ixhumeke ngokuqinile yini. Ukuthi ikhebula lesilawuli linokwethenjelwa yini. 2. Intambo yamandla nentambo kagesi ye-actuator eqondile yesilawuli ngeke ibekwe phakathi kwesixhumanisi sokuphakamisa nombhede ophezulu nangaphansi ...
1. Ukuphepha nokuzinza kwemibhede yokuhlengikaza. Umbhede wabahlengikazi ojwayelekile owesiguli esinokuhamba okulinganiselwe futhi esilele embhedeni isikhathi eside. Lokhu kubeka phambili izidingo eziphakeme zokuphepha nokuzinza kombhede. Umsebenzisi kufanele aveze isitifiketi sokubhaliswa nelayisense yokukhiqiza o ...
I-AC-AS009 Isibhedlela i-ambulensi ephuthumayo ...
Ithebula le-Gynecological AC-GEB001
AC-ST002 Isineke Stretcher Inqola Inqola
I-AC-MB018 Izindleko Zokulala Zomunye Wesibhedlela Sezokwelapha
AC-MB016 Imisebenzi Emibili Isibhedlela Sezokwelapha Isibhedlela ...
I-AC-MB009 Imisebenzi Emithathu Yesibhedlela Sesiguli ...
Inqola Ye-Trolley Yesibhedlela Esiphuthumayo ye-AC-ET027
Inqola Yezokwelapha Yezokwelapha, I-Trolley Medical, Inqola Yesibhedlela, I-Laptop Trolley, Inqola yabahlengikazi engenantambo, Inqola Yezokwelapha Enamadraki,